आज कुन–कुन खेल हुँदै ?
[ October 31, 2020 ] हेर्नुहोस् कात्तिक १६ गते आइतबारको राशिफल	राशिफल
[ October 31, 2020 ] शक्तिसंघर्षको उत्कर्षमा नेकपा, परीक्षामा दोस्रो पुस्ता	बिबिध
[ October 31, 2020 ] क्लिन फिडलाई कारण देखाएर टेलिभिजनको शुल्क बढाउन प्रस्ताव	राष्ट्रिय खबर
[ October 31, 2020 ] मुटुको भल्ब फेरेकाले पनि सजिलै जिते कोरोना	स्वास्थ्य
[ October 31, 2020 ] जुवामा हारेपछि १६ वर्षीय बालक बे पत्ता !	बिबिध
[ October 31, 2020 ] ‘कहीँ नभएको हाँडीगाउँको जात्रा’कोरोना त्रासका कारण स्थगित	राष्ट्रिय खबर
[ October 31, 2020 ] बालुवाटारमा प्रचण्डले ओलीलाई भने : अबको छलफल सचिवालयमै गरौँ	राष्ट्रिय खबर
[ October 31, 2020 ] कोरोना उपचार : जनतालाई सशुल्क, सांसद–मन्त्रीलाई निःशुल्क !	राष्ट्रिय खबर
[ October 31, 2020 ] भारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?	राष्ट्रिय खबर
[ October 30, 2020 ] हेर्नुहोस् कात्तिक १५ गते शनिबारको राशिफल	राशिफल
[ October 30, 2020 ] मुकेश चौरसिया ह त्या प्र करण : जाहेरी दर्तासँगै पूर्वसभासदसहित १० जना फ रार, श वको अन्त्येष्टि	राष्ट्रिय खबर
[ October 30, 2020 ] लम्साल दाजुभाइले बनाए स्वचालित सेनिटाइजर मेसिन : रोबोटपछि अर्को फड्को	बिबिध
Homeखेलकुदआज कुन–कुन खेल हुँदै ?
December 9, 2019 kandai kanda2खेलकुद
काठमाडौं मंसिर २३/१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को नवौं दिन आज सोमबार विभिन्न १३ खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । आज आ र्च री, बास्केटबल, बक्सिङ, क्रिकेट, फेन्सीङ, फुटबल, जुडो, पौडी, सुटिङ, स्क्वास, टेनिस र कुस्तीमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
महिला फुटबल र आ र्चरी पोखरामा हुनेछ । कुस्ती जनकपुर र अन्य खेल काठमाडौंमा हुँदैछ । महिला फुटबलको उपाधिका लागि नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग पोखरा रंगशालामा खेल्दैछ । नेपाल अघिल्लो संस्करणमा भारतसँग पराजित भएर रजत पदकमा चित्त बुझाएको थियो । यसपटक नेपाली टोली भारतसँग ब द ला लिने दाउमा छ । यद्यपी लिग चरणमा नेपाल भारतसँग १–० गोलले पराजित भएको थियो ।
नेपाल पुरुष फुटबलको भने फाइनलमा पुगेको छ । फाइनल खेल समापन समारोह अघि मंगलबार दशरथ ंगशालामा हुनेछ । फाइनलमा नेपाल र भुटान भिड्नेछन् । साग क्रिकेटको अन्तर्गत पुरुषतर्फको फाइनल खेल पनि सोमबार हुँदैछ । स्वर्णका लागि श्रीलंका र बंगलादेश प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सागको आठौं दिनसम्म नेपाल ४५ स्वर्ण जितेर पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ । एक सय ४५ स्वर्ण जितेको भारत शीर्ष स्थानमा छ ।
एकीकरणको ८ महिना पूरा नहुँदै समाजवादीमा मनमुटाव
महन्थ ठाकुर सभामुख बन्ने पक्का !
हेर्नुहोस् कात्तिक १६ गते आइतबारको राशिफल
हेर्नुहोस् कात्तिक १५ गते शनिबारको राशिफल
शक्तिसंघर्षको उत्कर्षमा नेकपा, परीक्षामा दोस्रो पुस्ता
नेपालका दुई प्रमुख दलहरु (नेकपा र कांग्रेस) आमरुपमा समान प्रकृतिका समस्याबाट प्रताडीत भइरहेका छन् : विचारशुन्यता, गुटबन्दी र ध्वस्त पार्टी जीवन । यो प्रताडनाको परिणाम पनि एकै प्रकृतिको छ : न रुपान्तरण, न सञ्चालन । यो प्रशव वेदनाले राजनीतिप्रति युवा […]
जुवामा हारेपछि १६ वर्षीय बालक बे पत्ता !
दैलेख : जन्मघर महाबु गाउँपालिका –५ काशिकाँध। पाँच वर्षदेखि नारायण नगरपालिका–८ किमुगाउँमा बसाई सरेर अभिभावकसँगै आएका गोविन्द बिक उमेरले १६ वर्षका भए। उनी बसन्त मावि किमुगाउँमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत छन्। कोरोनाको कारण विद्यालय बन्द भएपछि उनी दाजुहरुसँग मजदूरी गर्थे। […]
लम्साल दाजुभाइले बनाए स्वचालित सेनिटाइजर मेसिन : रोबोटपछि अर्को फड्को
बुटवल । गत वर्ष रोबोट बनाएर चर्चा कमाएका बुटवलको कालिका मानवज्ञान माविमा अध्ययनरत लम्साल दाजुभाइले विद्यालय बन्द भएको समय सदुपयोग गर्दै स्वचालित सेनिटाइजर मेसिन बनाएका छन् । कक्षा १० मा अध्ययनरत विशाल लम्साल र कक्षा १२ का कपिल लम्सालले लकडाउनको […]
मुटुको भल्ब फेरेकाले पनि सजिलै जिते कोरोना
पोखरा : यसै पनि मुटुरोगको नियमित औषधी खान्थे उनी। २४ वर्षअघि मुटुको अप्रेसन गरेयता उनी दिनहुँ औषधी खाइरहन्छन्। मुटुको भल्ब नै फेरे पनि उनको जिउज्यान भने हट्टाककट्टा नै छ। त्यसको पहेंली के भने उनी कहिल्यै नकारात्मक सोच्दैनन्। भन्छन्, ‘आत्मबल नै […]
क्लिन फिडलाई कारण देखाएर टेलिभिजनको शुल्क बढाउन प्रस्ताव
काठमाडौं । विज्ञापन रहित (क्लिन फिड) पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मासिक रुपमा ग्राहकले तिर्ने शुल्क बढ्ने टेलिभिजन वितरकहरुले बताएका छन् । विदेशी च्यानलहरुले नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड दिँदा खर्च बढ्ने भएकाले टेलिभिजन हेरेबापतको शुल्क बढ्नसक्ने तर्क उनीहरुको छ । नेपालमा […]
‘कहीँ नभएको हाँडीगाउँको जात्रा’कोरोना त्रासका कारण स्थगित
काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष कोजाग्रत पूर्णिमाको भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरपालिका–५ स्थित हाँडीगाउँ क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिने चोक्काथुनारायणको जात्रा यस वर्ष स्थगन गरिएको छ। तीननारायण एवं ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’समेत भनिने यो जात्रा यस वर्ष उपत्यकामा बढ्दै गएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण स्थगन […]
बालुवाटारमा प्रचण्डले ओलीलाई भने : अबको छलफल सचिवालयमै गरौँ
काठमाडौं, नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। १२ दिनदेखिको संवादहीनता तोड्दै शनिबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका प्रचण्डले एक्लाएक्लै छलफल भन्दा सचिवालयकै बैठक […]